သိုင်းဝါသနာရှင်များအတွက်သတင်းထူး | Thaing Wizard
Posted on January 19, 2015 by Aung Thu Htet
သိုင်းချစ်သူဝါသနာရှင်များအတွက် ၀မ်းမြောက်စရာ သတင်းထူးတစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိုင်းစာအုပ်စာပေများ ပြန်လည် ထွန်းကားလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါပဲ။ ဆရာကြီးကွန်ဖူးစိုးမြင့် ရဲ့ တပည့်တွေကနေ ဆရာကြီးရဲ့ စာအုပ်တွေ ကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေတော့မယ် ဆိုတဲ့သတင်းကို အရင်ကတည်းက ကြားထားတာပါ။
ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့ထွက်မယ် ဘာစာအုပ်တွေ ထွက်မယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး။ ကံကောင်းချင်တော့ဗျာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ကျွန်တော် နိုဘယ်-မြန်မာ စာပေပွဲတော် ကို သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ အမှတ်မထင် ဆရာကြီးကွန်ဖူးစိုးမြင့် ရဲ့ အမျိုးသမီးများအတွက် အရေးပေါ်ခုခံတိုက်ခိုက် နည်းများ စာအုပ်ကို တွေ့မိခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ၂၀၁၄ အောက်တိုဘာလကတည်းက ထုတ်ဝေထားတာပါ။ ဒီစာအုပ်ကို ကျွန်တော် အရင်ကတည်းက ebook လုပ်ပြီး တင်ပေးခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ကိုစိုကြီးက scan ဖတ်ပေးထားတာပါ။ ဒီနေရာ မှာ download ယူလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် printed version စာအုပ်ကိုလည်း ၀ယ်ယူအားပေးကြစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း နောက်ထပ် စာအုပ်အသစ်အသစ်တွေ ဆက်လက်ထုတ်ဝေသွားနိုင်ဖို့ အဆင်ပြေမှာမို့လို့ပါ။ ebook တွေကြောင့် ထုတ်ဝေသူတွေ အရှုံးပေါ်ပြီး ထပ်မံထုတ်ဝေဖို့ လက်တွန့်သွားမှာတော့ လုံးဝမဖြစ်စေချင်မိပါ။
အမျိုးသမီးများအတွက် အရေးပေါ်ခုခံတိုက်ခိုက်နည်းများ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
ဖြန့်ချိပေးတာကတော့ ရွှေချိုးဖြူစာပေပါ။ ဆရာကြီးကွန်ဖူးစိုးမြင့် ရဲ့ တပည့်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး နောက်နောင် လည်း ဆရာကြီးကွန်ဖူးစိုးမြင့် ရဲ့ စာအုပ်တွေရော၊ အခြားကိုယ်ခံပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်အသစ်တွေ ကိုပါ ဆက်လက်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ဖြူပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အရင်က ကျွန်တော် သိုင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကို ebook ပြုလုပ်ရတာဟာ ဈေးကွက်မှာ သိုင်းစာအုပ်စာပေ ရှားပါမှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုကစပြီး ကျွန်တော် ဆင်ခြင်ရ ပါတော့မယ်။ အဓိကကတော့ ဆရာကြီးကွန်ဖူးစိုးမြင့် ရဲ့ စာအုပ်တွေကို ebook မလုပ်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ တစ်ဆိတ်လောက်သည်းခံပြီး printed version ကိုပဲ စောင့်ဖတ်ပေးကြစေချင် ပါတယ်။ ဒါမှလည်း သိုင်းစာအုပ်စာပေဈေးကွက် ပြန်လည်ထွန်းကာလာနိုင်မှာလို့ ထင်ပါတယ်။
ရွှေချိုးဖြူစာပေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး သိုင်းစာအုပ်စာပေတွေ ၀ယ်ယူချင်တယ်၊ ထုတ်ဝေချင်တယ် ဆိုရင်တော့ လိပ်စာက ဒီမှာပါ…
ဖုန်း – ၁၉-၂၅၀၁၄၂၈၂၈၊ ၀၉-၅၀၂၉၆၄၁
ဆရာကြီးကွန်ဖူးစိုးမြင့်နဲ့ ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆင်မလိုက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာပါ။ ဆရာကြီးကတော့ အခုလက်ရှိ သိုင်းသင်တန်းမဖွင့်တော့ပါဘူး။ အရိုးအကြောရောဂါကုဆေးခန်းပဲ ဖွင့်ပါတော့တယ်။
အားလုံးပဲ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
This entry was posted in Martial Arts, Martial Arts Book and tagged ကွန်ဖူးစိုးမြင့်, စာအုပ်, သတင်း by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.
6 thoughts on “သိုင်းဝါသနာရှင်များအတွက်သတင်းထူး”
Myo Min on May 27, 2015 at 2:10 pm said:
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ကဆရာကြီးဦးစိုးမြင့်(ကွန်ဖူး)၇ဲ့တပည့်ရင်းတစ်ဦးပါ၊ Bando Min ပါခင်ဗျာ။ အခု ဆရာကြီးရဲ့ စာအုပ်တွေထဲက လျှပ်တပျက်ကိုယ် ခံပညာ ကို ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ဝေပြီးဈေးကွက်ကိုဖြန်.ထားပါတယ်။တခြားတပည့်တစ်ဦးမှလဲ ယခုတင်ထားသော အမျိုးသမီးကိုယ်ခံပညာ ကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေပြီးဈေးကွက်လိုဖြန်.ချီထားပါတယ်
ronald ma on July 4, 2015 at 3:17 pm said:
I amastudent of Sayar U Soe Myint when he openedaschool in 31st or 28th st, Rangoon. I have learned up toatutor level. I went to Myanmar last year December and requested my hotel boy to search Sayar for paying respect. He came back and said that he did not see any sign board at sayar’s house. what happened to him? is he still alive. ronald ma
Aung Thu Htet on July 7, 2015 at 3:59 pm said:
Sayargyi U Soe Myint is now retired from Martial Arts Training. He only treat the patients for some injury. His clinic is in SinMaLite, Bayintnaung Road, Kamaryut Township.
ronald ma on July 8, 2015 at 10:51 am said:
thanks Aung Thu Htet, if you have the phone number, i would be really grateful. ronald
Aung Thu Htet on July 9, 2015 at 9:21 am said:
I’m not sure but I think you can contact via Saya Yan Naing. See at https://thaingwizard.wordpress.com/martial-arts-institute/
ronald on July 9, 2015 at 10:49 am said:
great, will contact Saya Yan Naing. cheers. ronald